Tag: pịa ntọhapụ | Martech Zone
Tag: pịa ntọhapụ
Wenezde, August 16, 2017 Wenezde, August 16, 2017 Douglas Karr
Otu n’ime ndị ahịa anyị juru anyị anya taa, ha mere ka anyị mata na ha debanyere aha maka Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi nke otu n’ime ndị ọrụ ha tụrụ aro ebe ha nwere ike kesaa mgbasa ozi ha na saịtị karịrị 500 dị iche iche. M na-asụ ude ozugbo… nke a bụ ihe kpatara ya: Pịa Mgbasa Ozi Nkesa anaghị atụnye ọdịnaya ị na-akwalite ma ọlị, yabụ belụsọ na mmadụ na-ege ntị nke ọma maka mbipụta mgbasa ozi akọwapụtara, ha anaghị ahụkarị na nsonaazụ ọchụchọ. Mgbasa Ozi Mkesa
Oge eruola ịkwụsị nkesa mgbasa ozi akpaaka maka SEO
Tọzdee, Nọvemba 20, 2014 Tọzdee, Nọvemba 20, 2014 Douglas Karr
Otu ọrụ anyị nyere ndị ahịa anyị bụ ịlele ogo nke backlinks na saịtị ha. Ebe ọ bụ na Google ejirila aka tinye ngalaba na njikọ sitere na isi mmalite nsogbu, anyị ahụla ọtụtụ ndị ahịa na - alụ ọgụ - ọkachasị ndị goro SEO ụlọ ọrụ na mbụ na backlinked. Mgbe anyị chọpụsịrị njikọ ndị a na-enyo enyo, anyị ahụla mmelite na ogo n'ọtụtụ saịtị. Ọ bụ a-agwụ ha ike usoro ebe ọ bụla njikọ na-enyocha na kwupụtara
Matrix Ahịa ọdịnaya
Usoro ịre ahịa ọdịnaya na-aga n'ihu na-agbanwe, ọkachasị n'ọganihu na teknụzụ mkpanaka yana ịnweta nnukwu bandwidth na-aghọ ebe nkịtị. Ndị na-ere ahịa kwesịrị ịmatakwu ihe na ụzọ ha iji mepụta ọdịnaya. Otu ihe anyị na-eme na-arụ ọrụ mgbe niile na mgbagwoju anya… anyị na-emepụta ihe ngosi ma jiri ọdịnaya maka webinar, anyị na-eji ọdịnaya ahụ maka ihe ngosi ebugharị na Slideshare, anyị na-eji ọdịnaya ahụ iji zụlite infographic na ikekwe ụfọdụ ahịa
Kacha mma. Mbipụta ndị nchụ nta akụkọ. Mgbe.
Satọde, Febụwarị 16, 2013 Saturday, October 18, 2014 Douglas Karr
Anyị na-enweta mkpokọta mbipụta akụkọ na igbe mbata anyị kwa ụbọchị ma ana m eche na a na-ehichapụ 99% ha n'otu ntabi anya. Nke ahụ apụtaghị na ha abaghị uru… anyị na -elekarị anya maka mpempe akwụkwọ dị mkpa ga-emetụta gị ndị be anyị. Uru nke mbipụta akụkọ bụ nkesa na-arụ ọrụ nke ọma… ọghọm bụ na a na-edekarị ha edeghị nke ọma yana mgbakwunye - ezubere iche Mgbe anyị jụrụ Dittoe
Tuesday, April 5, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Anyị na ụfọdụ ndị ọrụ mmekọrịta ọha na eze dị ịtụnanya na-arụ ọrụ anyị na ndị ahịa anyị. Mmekọrịta ọhaneze ka bụ nnukwu ego - ndị anyị na Dittoe PR enwetala anyị kwuru na New York Times, Mashable na ọtụtụ saịtị ndị ọzọ ama ama. Ọ bụ ezie na ndị ọkachamara PR ghọtara otu esi edepụta nkwupụta mgbasa ozi na-akpali akpali ma kesaa ha na ndị na-ege ntị ziri ezi, oge ụfọdụ ha anaghị ebuli mgbasa akụkọ mgbasa ozi yana ha nwere ike
Kedu otu ọ dị mfe iji azụmahịa gị na ịntanetị?
Fraịdee, June 26, 2009 Douglas Karr
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla ana m enweta njikọ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na ntanetị ma ọ na-esiri m ike ịchọta ihe m chọrọ ma ọ bụ ịnyagharịa ebe m chọrọ ịga. Ọ bụ ihe ịtụnanya nye m etu ụlọ ọrụ ụfọdụ siri sie ike webụsaịtị ha. M ga-azụ ahịa na ọtụtụ saịtị ma ọ bụrụ na ha emeghị ka ọ bụrụ ihe jọgburu onwe ya! Naanị m mere ya n'ụzọ niile site na usoro ọtụtụ ụdị na saịtị na nkeji ole na ole gara aga naanị
Tọzdee, Febụwarị 21, 2008 Sọnde, Febụwarị 28, 2016 Douglas Karr
Usability bụ sayensị, ma ụfọdụ n'ime ya bụ mmuo pụta ụwa. Echetara m na mụ na ndị mmadụ nwere esemokwu banyere ojiji mgbe m rụrụ ọrụ dị ka onye njikwa ngwaahịa. Enwere ụfọdụ ihe enyere - dịka etu anya si esochi ihuenyo (n'aka ekpe gaa n'aka nri), etu ha si agbada ala, yana etu ha si atụ anya ime ihe na ala aka nri. Ọ bụghị ọtụtụ sayensị metụtara, ụfọdụ n'ime ihe ndị a bụ ihe ebumpụta ụwa, na ụfọdụ n'ime